Xukuumadda oo soo saartay Go'aamo cusub | KEYDMEDIA ONLINE
Awaamiir hor leh oo ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha xil gaarsiinta ah ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa goor dhaw loo akhriyay bulshada Soomaaliyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya ayaa ka akhriyay warbaahinta ku hadasha Afka dowladda awaamiir kasoo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Warbixintan ayaa timid kaddib markii guddiga qiimeynta xanuunka Covid-19 ay soo gudbiyeen inuu soo laba-kacleeyay mar kale caabuqa, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta.
Keydmedia Online ayaa hore usoo qortay in Dowladda uu waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo ay orsheyneyso in ay magaalada Muqdisho ku soo rogto bandow maalmo gaaban ah si ay uga hor tagto bannaan-baxa ay Mucaararku ku dhawaaqeen.
Saraakiil sar sare oo Fahad iyo Farmaajo ka socday ayaa Subaxdii Talaadada kulammo la qaatay taliska Booliska Soomaaliya iyo kan Gobolka Banaadir, sida ay Keydmedia Online ka ogaatay Ila-wareedyo lagu kalsoon yahay oo kamid ah Booliska dalka, waxaana la isla meel dhigay in la joojiyo guud ahan isku socodka Magaalada dhowr maalmood.
Saacaddo kadib markii ay Keydmedia Online shaacisay macluumaadkaas, ayuu Wasiirka Warfaafinta ku dhaqaay go'aanadan hoos ku qoran:
In la xiro goobaha waxbarashada kuwa dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida Jaamacadaha iyo Iskuulada muddo laba toddobaad ah oo ka billaabata 03/03/2021 kuna eg 17/03/2021.
Qof kasta waxaa waajib looga dhigay inuu qaato Af-xir (Mask) marka uu joogo goobaha la isugu yimaado sida suuqyada, masaajidyada, goobaha ganacsiyada masaajidyada iyo xafiisyada kale.
Si Kumeel gaar ah xafiisyada dowladda ayaa loo xiri doonaa laba isbuuc, shaqaalahana waxay kasoo shaqeyn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah.
Isku socodka caasimadda iyo gobollada dalka waa la dhimi doono muddada labada isbuuc ah ee ay xaaladdani jirto.
Gaadiidka dadweynaha iyo gaarka loo leeyahay caadi ayey usocon doonaan, waxaana waajib ah in dadka saaran ay xirtaan Af-xir (Mask) sidoo kalena ay hubiyaan kala-fogaanshiyaha.
Muddo soddon cisho ah ayaa la joojiyay xafladaha aroosyada iyo kuwa gaarka ah, sidoo kalena waxaa la joojiyay isku imaatinka goobaha ay ku caweeyaan dhallinyarada habeenkii.
Gawaarida BL -ka loo yaqaan iyo mootooyinka waxaa loo ogol yahay in ay qaadaan rakaab, waana in ay dhowraan nadaafadda, dadkana kala fogaadaan.
Kulamada dadka wixii ka badan 10 qof waa la joojiyay muddo bil ah.
Isku soobaxyada khaaska ah ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudo gaar ah:
- Waa in dadku isku jirsadaan laba mitir.
- Waana in qof kasta uu soo qaato Af-xir (Mask)
Garoomada ciyaaraha iyo goonbaha jir-dhiska waxaa la hakinayaa muddo laba toddobaad ah.
Tacsida, aaska iyo qabuuraha waa in dadku aysan ka badan 10 qofood, iyadoo la hubin doono kala fogaanshiyaha.
Wasaaradda caafimaadku waxay ilaalinaysaa faya-dhowrka guud goobaha ay dadku isugu yimaadaan.
Dadka jooga goobaha caafimaadka waa in ay xirtaan Af-xir (Mask)
Dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyada waa in ay qaataan Af-xir (Mask)
Dadka dhoofaya iyo kuwa soo galaya waxaa laga soo saaray go'aanadan hoos ku xusan:
- Qof kasta oo imaanaya ama dhoofaya waa inuu qaataa Af-xir (Mask)
- Dadka safraya waa in ay maraan baaritaan xaaladda Covid-19, goobaha loo asteeyayna waa in ay maraan kahor 72 saac inta aysan dhoofin.
- Qof aan wadan shahaadada baaritaanka Covid-19 looma ogolaan doono inuu dalka soo galo.
- Shahaadada qofka uu wato waa in ay soo baxdo muddo 72 saac gudahood.
- Shirkadaha diyaaradaha waa in ay daabacaan farriimaha kahor tagga Covid-19 una sharraxaan rakaabka diyaaradaha.
- Dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa waa in si iskood ah ay isku karantiilaan muddo 7 maalin ah, islamarkaana ay maraan tijaabda BCR.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa ilaaliya xafiisyada UN ka, kala badalkoodana waa in ay raacaan hab-raaca UNGU...